QC Kuba Assembly Pcb - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Iinxalenye control Quality
Ukuze uqinisekise ukuba amacandelo ukuba kusetyenziswa ezi quality elungileyo, kukho iinkqubo eziliqela ukuba silandela:
1. Ubume kule nezombane inkqubo uhlolo olubonakalayo iquka:
* Packaging zahlola:
-Weighed ukuze ihlolwe ukuba umonakalo
-Taping imeko package clubs-tus njl
mveliso -Original etywiniweyo vs. non-mveliso etywiniweyo
* Amaxwebhu Shipping iqinisekisiwe
-Purchase ukuze nocwangco yokuthengisa amanani umdlalo
* Manufacturer P / N, ubungakanani, umhla nekhowudi yokuqinisekisa, RoHS
* Ukhuselo sokufuma umqobo iqinisekisiwe (MSL) -vacuum itywiniweyo kunye Isalathisi ukufuma kunye elidityanisiweyo (uqale)
* Iimveliso nokupakishwa (isithombe babhala)
* Umzimba yokumakisha uhlolo (mshini kwaphela, itekisi ezaphukileyo, print kabini, izitampu i-inki, njalo njalo)
* Physical ukuhlolwa iimeko (bands elikhokelayo, imikrwelo, chipped emiphethweni, njalo njalo)
* Naziphi na ezinye Izitenxo ebonwayo bafumana
Xa kuhlolwa lonikezelo sethu sokubona igqityiwe, weemveliso kongasentla level-electronic ukuhlolwa lonikezelo components zobunjineli elandelayo ukuze ngokutsha.
weenjineli zethu abanezakhono kakhulu kwaye baqeqeshiwe bafumana components uvavanyo ezincane ukuqinisekisa ukungaguquguquki nomgangatho. Naziphi iindawo umsolwa okanye ukungangqinelani ezibonwa kwinkqubo uhlolo olubonakalayo kuya kungqinisiswa okanye isaphulelo ngokuthatha zesimo imveliso ye umbandela / iindawo.
Le zobunjineli nezombane Ukuhlolwa unikezelo iquka:
* Iziphumo Review uhlolo olubonakalayo kunye namanqaku
* Amanani Ukuthengwa kunye neentengiso imiyalelo eqinisekisiwe
* Ukungqinisiswa iilebhile (iibhakhowudi)
* Lomenzi logo kunye nomhla log yokuqinisekisa
* Inqanaba sokufuma uvakalelo (MSL) nobume RoHS
* Olubanzi Iimvavanyo olumileyo lokumakishela
* Uphononongo uthelekiso zomenzi Itheyibhile yeengcombolo ezivelileyo
* Photos eyongezelelweyo athathwe zaza
* Solderibility Testing, zesampulu bangenele inkqubo olukhawulezisiweyo 'ukwaluphala' ngaphambi kokuba avavanyelwe solderibility, ukuze bakuthathele ingqalelo iziphumo ukuguga endalo zokugcina phambi eBhodi- kuyanda; Ukongeza i-Engineering Components Uhlolo sibe kwizinga eliphezulu lokuhlola phantsi isicelo umthengi.
X-Ray Uhlolo for Assembly BGA
iinkqubo zethu lokuhlolwa automated X-ray bayakwazi esweni iintlobo iinkalo ibhodi yesiphaluka eprintiweyo kwimveliso ebandleni. Uhlolo lwenziwa emva kokuba inkqubo ngelotha esweni iziphene quality ngelotha. izixhobo zethu uyakwazi 'ukubona "amalungu solder aphantsi iiphakheji ezifana BGAs, CSPs kunye neetships MATHEMATICS apho amalungu solder ifihliwe. Oku kwenza sikwazi ukuqinisekisa ukuba ibandla kwenziwa kakuhle. Le iziphene kunye nezinye iinkcukacha ukubonwa yi kwinkqubo yohlolo ingagcinwa kwakhona ngokukhawuleza elandelelanisayo neqiqisiweyo, kananjalo inkqubo etshintshiweyo ukunciphisa iziphene nokuphucula umgangatho imveliso yokugqibela. Ngale ndlela nje kuphela iziphene kanye elibhaqiweyo, kodwa inkqubo lutshintsha tshintshwe ukuze unciphise amazinga lityala kwiibhodi kwakungena. Ukusetyenziswa kwale izixhobo kusivumela ukuba siqinisekisa ukuba migangatho iphezulu zigcinwa indibano yethu.
AOI ihlolwe ubuncinane SMT
Njengoko uvavanyo ubuchule eziziiprayimari kwindibano PCB, AOI usebenza ukuba sihlolwe nkqi nangokuchanekileyo iimpazamo okanye iziphene ezenzeka kwinkqubo indibano PCB ukuze umgangatho ophezulu lweendibano PCB ukwamkhulu kunye kungekho siphene emva komgca ibandla eshiya. AOI kunokusetyenziswa zombini ukuya PCBs ezingenanto kunye nebandla PCB. Apha PCB emangalisayo, siya zisebenza ikakhulu AOI ukuba ahlole SMT (umphezulu Mount Technology) umgca indibano kunye novavanyo iibhodi beesekethe ebalelelwe lilanga, probe flying iyasetyenziswa endaweni.
Xa PCB nguMmangaliso, izixhobo AOI iya kuxhomekeka ephakamileyo Isinxulumaniso ikhamera, le zixhobo sifake imifanekiso PCB komhlaba encediswa kwimithombo emininzi ukukhanya. Emva koko, uthelekiso iza kwenziwa phakathi umfanekiso kunye nebhodi parameters wayithimba okuye igalelo ikhompyutha kwangaphambili ukuze umahluko, ukungaqheleki okanye iimposiso iboniswe ngokucacileyo software processing yayo eyakhelwe-ngaphakathi. Inkqubo yonke unako esweni nanini na yesibini.
AOI ke contributive ekuphuculeni ukusebenza kuba obekwe kwi kumgca ibandla SMT, nje emva reflow. Kamsinya nje ezinye iingxaki kwaye kuhlolwa kwaye ingxelo yi izixhobo AOI, iinjineli siyakwazi ukutshintsha engqinelanayo parameters kwi zigaba angaphambili line ibandla ukuze iimveliso eseleyo baya kuhlanganisana ngokuchanekileyo.
Iziphene AOI uyakwazi kufikelela ngokuyintloko kuza ngelotha kunye namacandelo izigaba. Ngokwemiqathango ngelotha, iziphene ekungabonini evela iziphaluka ezivulekileyo, iibhulorho solder, iibhulukhwe solder, solder laneleyo solder kwemfuneko. iziphene Component ziquka waphakamisa ilothe, icandelo elishiyiweyo, emi kakubi okanye amacandelo engafanelekanga.